Toogashada biraha, birta birta, birta ahama - TAA
Bixinta abrasives tayo sare leh
Tilmaamaha alaabta Sare Xoojinta, adkeysiga sare, nolosha adeegga muddada dheer. Burburka hoose, boodhka oo hooseeya, wasakhda oo yar. Xirmo yar oo qalab ah, nolol dheer oo siyaado ah. Iska yaree culeyska nidaamka wasakhda, sii dheeree waqtiga isticmaalka qalabka kala-bixinta Faahfaahinta farsamada Qaab dhismeedka kiimikada% C 0.10-0.20% Si 0.10-0.35% Mn 0.35-1.50% S ≤0.05% P .00.05% Waxyaabaha kale ee isku darsamaya Ku darista Cr Mo Ni B Al Cu iwm Adag HRC42-48 / 48-54 Microstructure Duplex qaab dhismeedka ...
Astaamaha * Waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo noocyo kala duwan oo ah bacaad macdan ah & aalado aan macdan lahayn, sida corundum, silicon carbide, quartz arenaceous, beads glass, iwm. * Wuxuu badali karaa qayb kamid ah howsha soo qaadista. * Sii deynta boodhka oo hooseeya iyo jawiga hawlgalka oo aad ufiican, yaraynta daaweynta qashinka saliida. * Qiimo dhammaystiran oo hooseeya, nolosha adeeggu waa 30-100 jeer kuwa aan birta ahayn sida 'corundum'. * Ma B ...
Qalabka birta ah ee birta ah ee birta ah ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa toogashada / toogashada hawada ee noocyada kala duwan ee birta aan birta ahayn, alaabada birta ah, qaybaha aluminium, qalabka qalabka, dhagaxa dabiiciga ah, iwm, oo muujinaya midabka birta iyo gaarista siman, miridh la'aan , matt fi nishing daaweynta dusha eff ect. Iyada oo tayo sare leh ahama silig bir ah ceeriin, toogashada birta ahama waxaa lagu soo bandhigaa iyadoo qayb ka mid ah iyo adkaanta, taas oo dammaanad qaadaysa adeegyadeeda muddada dheer iyo qarax wanaagsan ect ect. Pe ...
Waxaan ku sameynay horumar weyn xagga maaddada iyo farsamooyinka ku saleysan habka wax soo saarka soo jireenka ah. Ka faa'iideysiga silig birta daawaha ah oo tayo sare leh sida substrate-ka sare u qaada astaamaha farsamada oo ka dhiga mid deggan. Hagaajinta farsamada fidinta taas oo ka dhigaysa ururka gudaha mid aad u cufan. Hagaajinta habka passivation dhaqanka ee gebi ahaanba ku tiirsan saameynta si loo yareeyo waxyeelada inta lagu jiro qaraxa, kor u qaadida nolosha adeegga. Tilmaamaha Farsamada ee Chemi ...
Faa'iidooyinka mashiinka qaraxa durbaan durugsan Technology engeeg lagu kalsoonaan karo: Drum mashiinada qaraxa shot waxaa soo saaray dhowr kala duwan oo kala duwan, noocyada iyo qiyaaso. Iyagu waa is haysta oo kaliya waxay leeyihiin raad aad u yar. Si joogto ah ayaa loo ogaan karaa iyadoo la isku xiro dhowr mashiin. Layout-friendly Layout: Dayactirka joogtada ahi wuxuu muhiim u yahay ilaalinta qiimaha muddada fog ee qalabka. Adeegyada waaweyn iyo albaabbada kormeerka waxay si fudud u helaan dhammaan qaybaha muhiimka ah. Natiijo ahaan ...
Qalabkayaga isku-dhafan ee adag-adag waxaa soo saaray brazing. Xaaladaha qaarkood awgood, lakabka dheeman ayaa si adag loogu dhejiyay substrate-ka birta ka dib habka dhalaalida biraha. Nooca noocan ah wuxuu leeyahay astaamaha waxtarka shiidaalka sare, nolosha dheer, amniga, ilaalinta deegaanka iyo wasakhda-la'aan. Guud ahaan beddel qalabka goynta 'corundum bond' iyo qalabka wax lagu nadiifiyo, dhammaan qalabka dheemanka elektroonigga ah ee qalafsan iyo kuwa dhexdhexaadka ah, iyo qaar ka mid ah dhalooyinka kulul ee la riixay ...
Xaraashka Isbuunyada 'Sponge Media' ayaa lagu heli karaa in ka badan 20 nooc, oo lagu gaarayo astaamo 0 ilaa 100 + micron. Dhammaan waxay soo saaraan qallalan, boodh hooseeya, qarax dib-u-celin yar. Sida ugu badan ee loo isticmaalo waa taxanaha TAA-S oo leh aluminium oksaydh iyo taxanaha TAA-G oo leh bir bir ah. Nooca Noocyada Aaladda Codsiga Wakiilka Warbaahinta ee Tirtir TAA-S # 16 ± 100 micron Aluminium oksaydh # 16 Degdeg iyo xamaasad u leh dahaadhka warshadaha adag. TAA-S # 30 ± 75 micron Aluminium oksaydh # 30 Ka saarida dahaadhka lakabyada badan iyo muuqaalka 75 mikron. TAA-S # 30 ± 50 micro ...
Marka la barbardhigo birta dhaqameed ee birta lagu sameeyo oo lagu burburiyo toogashada birta, qaadista birta birtu waxay leedahay astaamaha soo socda: Waxyaabaha ceyriinka ah Qaadista birta birta waxaa sameeya bir bir ah oo Chromium wadata taas oo leh awood adag oo qallafsan sababtoo ah maadada sare ee Chromium. Tikniyoolajiyad Qaadista birta birta ah waxaa lagu sameeyaa iyadoo si toos ah loo burburinaayo birta been abuurka ah ee been abuurka ah taasoo ka madax bannaan cilladaha tuurista. Duugga hoose Gobolka been abuurka ah ee dhalista birta leh geesaha fiiqan wuxuu leeyahay hanti farsamo ka sarreysa birta birta lagu rido ee dhaqameed leh ...
Daxalka birta ayaa meelwalba taagan, marwalba Si looga hortago birta birta, habka ugu caamsan ayaa ah in la isticmaalo daahan si loo ilaaliyo dusha sare ee alaabada birta. Dusha sare waa in la nadiifiyaa kahor ilaalinta kahortaga. Boqolaal wax soo saar iyo warshado ay ka mid yihiin maraakiib, taangiyada kaydinta, buundooyinka, birta str ...
Iyagoo wajahaya xaalada sii kordheysa ee suuqa ee warshadaha kala duwan, shirkaduhu waxay hordhigeen caqabado sare kharashyada wax soo saarka iyo shuruudaha tayada wax soo saarka. Nidaamka toogashada toogashada ee habka wax soo saarka waa xiriir muhiim ah oo saameeya qiimaha badeecada ...
J: Waxyaabaha lagu jaro saxanka: Goynta saxannada waxaa loo qaybin karaa laba nooc: Mashiinka jarista saxanka iyo saxanka jarista dheeman. Waxaa si ballaaran loogu isticmaali karaa jarista alaabada birta caadiga ah, birta birta ah & qalabka aan birta ahayn.